स्न्यापचटमा स्नाप अनसेन्ड कसरी गर्ने (२०२१) - नरम
स्नैपच्याटमा स्नाप अनसेन्ड कसरी गर्ने
स्न्यापचेट हाल सोशल मीडिया मिडिया अनुप्रयोगहरू मध्ये एक हो, विशेष गरी २ teenage बर्ष भन्दा कम उमेरका किशोर-किशोरीहरूका बीच। अन्य सामाजिक मिडिया प्लेटफर्मको प्रयोग विश्लेषकसँग तुलना गर्दा महिला प्रयोगकर्ताहरू यस अनुप्रयोगमा तुलनात्मक हिसाबले बढी हुन्छन्। यो एक अद्वितीय ढाँचा पछ्याउँदछ जुन अस्थायी छविहरू र साना भिडियोहरू साझा गर्नका लागि प्रयोगकर्ताहरूलाई आफ्नो परिवार र साथीहरूसँग साझा गर्न अनुमति दिन्छ।
प्राथमिक भएकोले स्नैपच्याटमा सञ्चारको ढाँचा छोटो मिडिया स्निपेट्सको टेम्प्लेट अनुसरण गर्दछ, तपाईं लोकप्रियतामा ट्याप गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं यो कोठामा राम्रोसँग जान गर्नुहुन्छ भने। यदि तपाईं आफ्नो सामग्रीको साथ रचनात्मक हुन सक्नुहुनेछ र तपाईंको सिर्जनाहरूमा सौंदर्य तत्वहरू लागू गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईं सजिलै यस प्लेटफर्ममा आफ्नो लागि नाम सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। यद्यपि यो अनुप्रयोगको सुविधाहरू र सेटि settingsहरू बारे सचेत रहन यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ तपाईंले यसका फाइदाहरू र प्रस्तावहरूको उपयोग गर्न चाहनु अघि। अब हामी कसरी स्न्यापचटमा स्न्याप अनसेन्ड गर्ने भनेर बुझ्ने कोशिश गरौं।
कसरी स्न्यापचटमा स्न्याप अनसेन्ड गर्ने?
एक स्न्याप के हो?
के तपाईं स्न्यापचटमा स्नाप अनसेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ?
१. प्रयोगकर्तालाई अनौठो बनाउँदै
२. प्रयोगकर्तालाई रोक्दै
Data. डाटा बन्द गर्दै
Your. तपाइँको खाता निष्क्रिय गर्दै
Account. खाता बाहिर लगिging
स्न्यापचटमा स्न्याप कसरी हटाउने?
तपाईंले स्न्याप अनसेन्ड गर्न प्रयास गर्नु अघि, स्न्याप भनेको के हो भनेर बुझ्दछौं?
कुनै चित्र वा भिडियो जुन तपाईं आफ्ना साथीहरूलाई पठाउनुहुन्छ स्न्यापचेट भनिन्छ तस्वीरहरू
जब तपाईं स्न्यापचट खोल्नुहुन्छ, तपाईं स्क्रिनको तल मध्य भागमा कालो घेरा फेला पार्नुहुनेछ। यसमा ट्याप गर्नुहोस् स्न्याप प्राप्त गर्नका लागि।
यी तस्वीरहरू एक अवधिको लागि हेर्न सकिन्छ १० सेकेन्ड प्रति रिप्ले। सबै प्राप्तकर्ताहरूले तिनीहरूलाई एक पटक अवलोकन गरे पछि स्न्यापहरू मेटाइने छन्। यदि तपाईं तिनीहरूको उपलब्धता अनलाइन अवधि बढाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं तिनीहरूलाई आफ्नोमा थप्न सक्नुहुन्छ कथाहरू । प्रत्येक कथा २ 24 घण्टा पछि समाप्त हुन्छ।
स्नेपसको सम्बन्धमा प्रयोग हुने अर्को सामान्य शब्द हो Snapstreak। एक स्न्याप स्ट्र्याक एक प्रवृत्ति हो जुन तपाईं आफ्नो साथीसँग कायम राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं र तपाईंको साथीहरूले एक अर्कालाई लगातार तीन दिनको लागि स्न्याप गर्नुभयो भने, तपाईंले स्न्याप स्ट्र्याक सुरू गर्नु हुनेछ। फ्लेम इमोजी तपाईंको साथीको नामको छेउमा प्रदर्शित हुन्छ र दिनहरू संख्या सूचित गर्दछ जसका लागि तपाईंले स्ट्रिम राखिरहनु भएको छ।
तर केहि अवसरहरुमा तपाई आफैलाई यस्तो स्थितिमा पाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईले गल्तिले गलत व्यक्तिलाई तस्वीर पठाएको हुन वा तपाईका साथीहरुलाई नराम्रो तस्वीर पठाएको हुन सक्छ। तसर्थ, तपाईं आफैंलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पाउनुभन्दा पहिले स्न्याप मेटाउनु राम्रो हुन्छ। हामी मध्ये धेरैले साधारण समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गरेका हुन्छौं के तपाईं स्नापच्याटमा सन्देशहरू पठाउन सक्नुहुन्न? । तर के त्यसो गर्नु सम्भव छ? हामीलाई पत्ता लगाउनुहोस्।
यो पनि पढ्नुहोस्: Snapchat कसरी लोड गर्ने तस्विरहरू फिक्स गर्ने?
विन्डोज १० हामीले नयाँ विभाजन सिर्जना गर्न सकेन वा अवस्थित एक फेला पार्न सकेनौं
सामान्यतया, स्न्यापचेटले पाठ सन्देशहरू, भिडियोहरू, र तस्विरहरू रिसीभरले तुरून्त मेटाए पछि तिनीहरूलाई मेटाउँछ। यदि तपाइँ यसलाई संरक्षण गर्न चाहानुहुन्छ, एक छ बचत गर्नुहोस् विकल्प। तपाईं चाहानुहुन्छ स्नैप पनि पुनः प्ले गर्न सक्नुहुनेछ। प्रयोगकर्ता च्याटको स्क्रीनशट पनि गर्न सक्दछ। यद्यपि, अर्को व्यक्ति जसलाई तपाइँ टेक्स्ट गर्दै हुनुहुन्छ तपाइँको कार्यहरूको बारेमा सूचना प्राप्त गर्ने छ। यसको बारेमा जानको लागि कुनै छुट्टै मार्ग छैन।
पठाइएका सन्देशहरू र तपाईंको च्याटबाट स्नेपहरू मेटाउने जब तपाईं चाहानुहुन्छ ठूलो कुरा होइन। यद्पि तपाईले यसको बारेमा केहि गर्न सक्नु हुन्न यो डेलिभर भएपछि, जुन तपाईको अन्तबाट एकपटक प्रापकलाई पुग्छ। तर यो सम्भव छ कि परिस्थिति खडा हुनेछ जहाँ तपाईले आफ्नो कार्यलाई फिर्ता लिनु पर्छ जे भए पनि।
स्न्यापचेट प्रयोगकर्ताहरूले स्न्याप अनसेन्डल गर्न धेरै विधिहरू समाहित गर्न कोशिस गर्छन्, यदि तिनीहरूले कसैलाई पठाए जसको लागि यो अभिप्राय थिएन वा गलत व्यक्तिलाई गलत स्न्याप पठायो। हामी सबैलाई धेरै प्रयास गरिएका विकल्पहरू हेर्ने क्रममा हेरौं कसरी स्नापच्याटमा स्नाप अनसेन्ड गर्ने।
यो सम्भवतः पहिलो विधि हो जुन प्राय: प्रयोगकर्ताहरूले अवलोकनका लागि अप्ट इन गर्छन् तपाईं Snapchat मा सन्देश अनसेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ । कसैलाई अवरुद्ध गर्दै किनभने तपाईं तिनीहरूलाई एक स्न्याप हेर्न चाहनुहुन्न थोरै चरम हुन सक्छ। जे होस्, यसले स्न्यापहरू अनसेन्ड गर्न कार्य गर्दैन, र प्रापकले अझै यसलाई पठाउनको लागि सक्षम हुनेछ। फरक मात्र यो हो कि तिनीहरूले स्नापमा जवाफ दिँदैनन् किनकि तपाईंले उनीहरूलाई अनफ्रेट गर्नुभयो।
अघिल्लो प्रयास गरिएको र परीक्षण गरिएको विधिबाट जारी राख्दै धेरै प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूलाई गलत स्न्याप पठाएको प्रयोगकर्तालाई रोक्न र अनब्लक गर्न प्रयास गरे। यो एक विधि थियो जुन प्राय जसो प्रयोगकर्ताहरूले पहिले कसम खानु पहिले यसैले काम गर्ने गर्दछ। पहिले, यदि तपाईं एक स्न्याप पठाए पछि एक प्रयोगकर्ता ब्लक, यो खुला रूपमा प्रदर्शित हुनेछ र अब देख्न मिल्दैन। जे होस्, स्न्यापचेटले आफ्नो च्याट सेटिंग्स सायद अपडेट गरेको छ, र नतिजाको रूपमा, अवरुद्ध प्रयोगकर्ता अझै पनी तपाइँको स्नेप हेर्न को लागी सक्षम हुनेछ तपाई एकपटक पठाउनु भए पछि। तसर्थ, यो विधि अब व्यर्थ छ।
धेरै प्रयोगकर्ताहरू विश्वास गर्दछन् कि उनीहरूको मोबाइल डाटा वा वाइफाइ बन्द गर्नाले स्नैपलाई उनीहरूको फोन छोड्नबाट रोक्दछ र कार्य रोक्दछ। धेरै प्रयोगकर्ताहरूले यो विधि पत्ता लगाउन को लागी सुझाव दिए कसरी स्नापच्याटमा स्नाप अनसेन्ड गर्ने । यद्यपि यहाँ एउटा क्याच छ। तपाईका सबै स्नापहरू र पाठ सन्देशहरू स्न्यापचटको क्लाउड सर्भरमा भण्डार गरिएका छन् तपाईले त्यसलाई आफ्नो प्राप्तकर्ता च्याटमा अपलोड गर्ने बित्तिकै। यसैले, तपाईंको उपकरणलाई हवाइजहाज मोडमा स्विच गर्ने वा डाटा बन्द गर्ने काम कुनै सहयोगी हुने छैन।
पहिले तपाईं यो स्नीप अनसेट गर्न यो विधि अनुसरण गर्न सक्नुहुने थियो, र प्रापकले तपाईंलाई यो पछि हेर्न सक्षम हुनुहुने छैन। तपाईंको खाता निष्क्रिय गरियो । तर यो बगका कारण भएको हो र स्न्यापचेटमा वास्तविक सुविधा थिएन। नतिजाको रूपमा, विकासकर्ताहरूले बग सुधार गरेपछि यो विधि प्रभावी हुन बन्द भयो।
प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको खाताबाट लग आउट गर्न को लागी कोशिश गरे जब उनीहरूले महसुस गरे कि उनीहरूले त्रुटि देखा पर्यो। केहीले आफ्नो उपकरणमा अनुप्रयोगको क्याच र डाटा खाली गरे पनि, तर यो क्वेरीको समाधान थिएन तपाईं Snapchat मा सन्देश अनसेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ ।
अब हामी सबै विकल्पहरू देख्यौं जुन प्राय: प्रयोगकर्ताहरूले हेर्ने क्रममा टर्न गर्दछन् कसरी स्नापच्याटमा स्नाप अनसेन्ड गर्ने । यी सबै विधिहरू अब पुरानो हो र तपाइँको मुद्दालाई अब प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्दैन। त्यहाँ एक मात्र विकल्प छ जुन प्राप्तकर्तामा पुग्न अघि तपाईंको स्न्याप मेटाउने क्रममा लागू गर्न सकिन्छ।
यो पनि पढ्नुहोस्: कसरी भन्ने हो कि यदि कसैले तपाइँको स्नैपचट कहानी एक पटक भन्दा बढी हेरीरहेको छ भने
यो सम्भवत एक मात्र विधि हो जसले तपाईंलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति र तनावपूर्ण संघर्षबाट बचाउन सक्छ। स्न्यापचेटसँग मिडिया मेटाउने विकल्प छ तपाईको च्याटबाट स्नापहरू, सन्देशहरू, अडियो नोटहरू, GIFs, Bitmojis, स्टिकर, र यस्तै। यद्यपि, प्राप्तकर्ताले तपाईले त्यो विशेष स्न्याप मेटाउनुहुनेछ भनेर हेर्न सक्षम हुनेछ, र यो अपरिहार्य छ। अब हामी कसरी स्नैपच्याटमा स्नैप मेटाउने भनेर हेरौं।
१ विशेष च्याट खोल्नुहोस् जसमा तपाईं स्न्याप मेटाउन चाहानुहुन्छ। मा थिच्नुहोस् सन्देश र यसलाई समात विकल्प हेर्नको लागि लामो समयको लागि। त्यहाँ तपाईं पाउनुहुनेछ विकल्प मेटाउनुहोस् । सन्देश मेटाउन यसमा ट्याप गर्नुहोस्।
२ पप-अप पुष्टि गर्न देखा पर्नेछ यदि तपाईं स्न्याप मेटाउन चाहानुहुन्छ भने ट्याप गर्नुहोस् मेटाउन ।
You. तपाईं पनि त्यस्तै तरीकाले पाठ सन्देशहरू मेटाउन सक्नुहुन्छ। एउटा पाठमा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई हेर्न लामो प्रेस गर्नुहोस् मेटाउन विकल्प।
Again. फेरी, तपाई प्रोम्टको रुपमा हेर्नुहुनेछ यदि तपाई पाठ मेटाउन चाहानुहुन्छ भने। क्लिक गर्नुहोस् 'पाठ मेटाउनुहोस्' प्रापकको च्याटबाट तपाईंको पाठ मेटाउन।
यो विधि अनुसरण गर्दा मिडिया कुनै पनि प्रकारको खाली हुन्छ कि तपाईंले आफ्नो साथीहरूसँग गल्तीले साझेदारी गर्नुभयो।
Snapchat मा कसरी स्थान ट्याग गर्ने
एक एन्ड्रोइड फोनमा दुई स्न्यापचट खाताहरू कसरी चलाउने?
कसैलाई प्रयोगकर्तानाम वा नम्बर बिना नै स्न्यापचटमा फेला पार्नुहोस्
हामी आशा गर्दछौं कि यो लेख सहयोगी थियो र तपाईं सक्षम हुनुभयो स्न्यापचटमा स्नाप अनसेन्ड गर्नुहोस् । मिडिया आइटम अनसेन्डिंग स्नैपच्याटमा अब सम्भव छैन। विशेष तस्वीरहरू वा पाठहरू मेटाउनु एक मात्र विधि हो जुन च्याटबाट स्नापहरू मेटाउन सफलतापूर्वक प्रयोग गर्न सकिन्छ।
विन्डोज १० अपडेट पछि माइक्रोफोनले कार्य गरिरहेको छैन
USB ट्रान्सफर विन्डोज १० लाई गति दिनुहोस्
विन्डोज १० रिजोलुसन परिवर्तन गर्न सक्दैन
विन्डोज १० मेमोरी त्रुटिमा कम
मेरो ब्लुटुथ विन्डोज १० हरायो